Kona Sutra ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Kona sutra nyochaa - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kona sutra nyochaa - Akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kona Sutra ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Gbaa ịnyịnya: Ezigbo na-agbanwe agbanwe na-eleghị anyanke kacha mmaokwu anyị ga-eji kọwaaKona Echi. A na-arụ ya mgbe niile n’ogo dị elu kemgbe ọtụtụ afọ, o yighị ka ike gwụrụ ya. Melite na-aga, ọ bụ aukwuna mgbakwunye na ngwa agha gị.Ọgọst 5 2020
Ndewo, nke a bụ Bike Touring Mike! Nke a bụ nke m Kona Sutra, 2018, nke m nwere maka obere ihe karịrị afọ abụọ. Enwere m ya n'ọtụtụ njem gụnyere mba abụọ. Otu na Czech Republic na otu na France.
Eji m ịnyịnya ígwè a gbaa ihe dị ka puku kilomita ise. Karịsịa n'okporo ụzọ awara awara ma n'okporo ụzọ gravel ole na ole dị ebe a. Nke ahụ bụ ụdị XL ma ọ bụ 58 centimeters.
Maka ntụnye, m dị 6 ụkwụ 2 ma ọ bụ 188 centimeters ogologo. Igwe kwụ otu ebe na-abịa na taya Schwalbe Marathon Mondial. Schwalbe Marathon taya bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, taya ndị kasị ewu ewu maka ndị njem nleta ịnyịnya ígwè.
N'ime afọ abụọ m nwere igwe kwụ otu ebe a, enweghị m taya ọ bụla nke taya ọ bụla ka ha bụrụ ihe akaebe nke ọma mgbe m nọ ala ebe a, nwekwara ike ikwu ntakịrị banyere igwe kwụ otu ebe. O siri ezigbo ike, ọ nwere ọnụ okwu iri atọ na isii. Rim m bụ 19 milimita n’obosara na ndị nke ọzọ dị milimita iri abụọ na atọ n’oche m, nke pụtara na ị nwere ike ịdaba na taya.
Ya mere na i nwere ike na-enweta ihe ndị ọzọ gravel ahụmahụ The rim nwekwara tubeless njikere otú i nwere ike tọghata taya na tubeless ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ gị Ihe The taya na-abịa na m igwe kwụ otu ebe bụ 37 millimeters obosara m na-eche na ndị ọhụrụ nwere a taya na ha 40 taya millimita n'obosara igwe kwụ otu ebe bụ igwe kwụ otu ebe bụ nke izizi nwere anyụike ịgbara ọsọ n'ihu na n'azụ wiil, nke pụtara na ọ ga-ewe obere sekọnd ka wheel ahụ pụọ na etiti ahụ. Ma na nloghachi ị ga-enweta taya kwụ ọtọ nke na-ewepụ mgbe niile na Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere diski brek dị ka igwe kwụ otu ebe a, ọ bụrụ na ị nwere wiilị nke dara ntakịrị. Diski ahụ na-ete naanị ihe mgbochi breeki mgbe ị chọghị.
Mmiri mmiri n'ime ahụ
Ọ ga-emekwa ka e nwee ọtụtụ mkpọtụ na ihe ụfụ. Kona Sutra biakwara na Brooks B-17 sadulu. Kedu ụdị ụdị nhọrọ nhọrọ n'etiti ndị njem nlegharị.
Ọfọn, nke a bụ ụdị oge mgbanwe. Ọtụtụ mmadụ hụrụ n'anya Brooks ha mgbe ndị ọzọ enweghị ike iguzo ya. Ihe bụ, ozugbo ị malitere ịnya ya, ọ ga-adịchaghị mma, mana nye ya izu ole ma ọ bụ otu.
Na sadulu, nke bụ akpụkpọ anụ, ga-akpụzi onwe ya mgbe ị gachara mgbe otu ọnwa gachara ma ọ bụ ya mere na ị nwere nkwekọrịta zuru oke n'etiti gị na sadulu ahụ ma ọ ga-enwe ahụ iru ala na ịnya anyị na ebe anyị nọ na ntụgharị. Kona Sutra biara na ogwe aka nkwụsị. A na-edepụta nke ziri ezi na azụ ka ihu dị n'ihu esemokwu.
Ihe dị mma gbasara esemokwu esemokwu bụ na ị nwere ike iji aka gị dozie ọnọdụ nke onye mmechi iji zere ịpị. Uru nke iji ndị a kama ịgbanwee STI oge niile bụ na ha chọrọ mmezi ntakịrị na njem gị. The brek bụ n'ibu diski brek akpọ TRP gburugburu brek.
Ọ bụ ezie na n'ibu, ha na-eme dị ka haịdrọlik diski brek site tightening ma breeki pad gburugburu N'otu oge ahụ, M n'ezie mere ọ bụla mgbanwe na igwe kwụ otu ebe, na-agbakwunye ihe karịrị otu ekweisi spacer iji bulie elu nke handlebars maka a ọzọ ziri ezi nọdụ Ọnọdụ Ma na usoro nke mmezi, M na-agbanwebeghị yinye ma, ma m ga-eme nke a n'oge na-adịghị Nanị ihe m gbakwunyere na igwe kwụ otu ebe na-adịghị na igwe kwụ otu ebe mgbe m zụtara ya bụ ndị a lowriders akpọ X-treme lr1 lowriders Ndị a bụ ezigbo ndị na-agba obere ala, mana enwere m obi a withụrị na ha n'ihi na ha ejiri nwayọ nwayọ, ma ha emeela m nke ọma na afọ ndị ọzọ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ekwesịrị m iji loop a rịgoro ka ị pịa ya na ndụdụ iji nwee ike ị nweta ọhụụ abụọ Site n'ụdị 2019, Kona Sutra na - abịa ugbu a na protrusions atọ na ndụdụ have nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche maka ndị dị ala dị ala ma ị nwekwara ike ịrịgo Salsa Ihe ọ bụla onu na ndụdụ, ị nwere ike ịrịgo karama mmiri atọ na eku i nwekwara ike dabara abụọ ọzọ agha karama na ndụdụ, ma m kpebiri na m na-eji ndị isi ndị a kama iji maka m lowrider. Otu ihe m ga - achọ itinye ebe a, ọ bụ na ị nweghị ike itinye otu nnukwu karama ahụ na ala nke ala tube n'ihi na karama ahụ ga - akụ ọkpọ ahụ oge niile, yabụ naanị m na - eji karama abụọ buru ibu ebe a na m nwere obere karama mmiri 500 mililita na ala nke ala tube You ka nwere ike ibute galọn mmiri abụọ, nke ga-ezuru ọtụtụ ndị m maara banyere igwe kwụ otu ebe kemgbe m nyocha ikpeazụ.
Nke mbụ metụtara onye oburu akpa. Ọtụtụ ndị chọrọ ịma ụdị nke ụgbọ ibu ebu. Ọ bụ n'ezie nanị a ọkọlọtọ ibu ogbe.
Amaghị m aha ahụ, ma ọ na-enyere m aka kemgbe ọtụtụ afọ. Naanị mmebi m nwere na ya bụ naanị obere flake nke agba nke bịara mgbe m na-ebu igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ elu. Ajụjụ ọzọ Ndị mmadụ na-ajụ m ọtụtụ mgbe otu Brooks sadulu si emetụta mmiri ozuzo.
Ọ bụrụ na ị na-anya ya ọ bụghị nnukwu nsogbu dịka ị nọdụrụ na ya chebe ya pụọ ​​na mmiri ozuzo si n'elu. Ndị na-efe fend na-arụ ọrụ ndị ọzọ ka ha na-echebe sadulu na ala. I nwere ike ichebe ya n’abalị mgbe mmiri na-ezo.
M nnọọ tinye a plastic akpa ya nwekwara ike ịzụta a ridiculously oké ọnụ Brooks oche mkpuchi ma ọ bụrụ na i nwere a otutu ego na ya Ma dị nnọọ tinye a plastic akpa ya na ọ ga-adị mma. Ajụjụ ọzọ a na-ajụ m oge niile, echekwara m na ọtụtụ n'ime gị na-ajụkwa nke ahụ. Ego ole ka igwe kwụ otu ebe gị? Ugbo ala m na-enweghị akpa na pedals na-ebu kilogram 14.5.
Cheta, nke a bụ XL igwe kwụ otu ebe. Nke a bụ ụdị kachasị nke Kana Sutras. Yabụ enweghị m ike ikwu maka ụdị ndị ọzọ, mana echere m na ụdị niile dị n'agbata kilogram 13.5 na 14.5.
Kedu ihe bụ ọkwa m niile nke igwe kwụ otu ebe Kona Sutra? Mgbe m zụtara ya, ana m atụnyere igwe kwụ otu ebe anọ. Ọ bụ Kona Sutra, Trek 520, Salsa Marrakesh na Surly Disc Trucker. Ha niile dị na ọnụahịa ọnụahịa $ 1,500.
N'ihi ya, m tụnyere ihe dị iche iche nke igwe kwụ otu ebe ma chọpụta na nke a nwere ìgwè Shimano Deore ebe ndị ọzọ nwere Shimano Alivio. Nke a dịtụ mma karịa nke ọzọ anyịnya igwe, gbakwunyere na ọ bịara na Brooks sadulu, Schwalbe Marathon taya, na a akpa ogbe n'ihi na ọ bụ n'ezie a ikuku m na-ahọrọ a igwe kwụ otu ebe, na mgbe m nọkwa ya ruo ihe dị ka afọ abụọ m n'ezie enweghị ihe ọ bụla ị ga-eme mkpesa banyere ya Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịkwọ ụgbọala yana ọ dịkwa ike ma sie ike ịchụpụ ya n'okporo ụzọ gravel dị ka ebe a n'oké ọhịa a ma echetara m ya nke ọma maka afọ abụọ mbụ. Enwere m ike ' t eme ihe ọ bụla ọzọ karịa nke a Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nyocha a ma ị na-enwe mmasị isiokwu ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ọwa youtube m, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọdịnaya binge kwesịrị ekwesị.
Ebe dị mma ịmalite bụ ịlele njem m kachasị ọhụrụ n'akụkụ Vindel River Trail ebe a dị n'ebe ugwu Sweden, ị nwere ike ime nke a site na ịpị li. Pịa nk n'elu nkuku Ma ọ bụghị, lee gị oge ọzọ!
Ego ole ka Kona Sutra dị?
Iheibu ibunke igwe kwụ otu ebe bụ ihe ijuanya na mbido - na-atụle 15kgs na-enweghị ngwa, ọ na-ebuwanye ibu karịa igwe mkwadoro ugwu Hardrock pụrụ iche, nke na-ekwu ihe!
sexy ịgba ígwè
Kona Sutra ọ bụ gravel bike?
Ugwuigwe kwụ otu ebe, okporo ụzọigwe kwụ otu ebe, nagravel igwe kwụ otu ebebanye n'ime ụlọ mmanya… naEchia mụrụ! Part ike odori anya-ụzọ igwe, akụkụ ogologo osisi tourer nrọ, naSutra igwe kwụ otu ebebụ ndị na-agba ịnyịnya ịhọrọ maka hardcore ndị ọgba tum tum n'ụwa niile.
Gịnị bụ Kona Echi?
IheEchiọtụtụ ihe. Ọ na-arụ ọrụ. Ọ mara mma. Ọ bụ n'ụzọ dịgasị iche iche, ọ dịkwa njikere maka ogologo njem na njem igwegharị nke nrọ gị. Nke anyiKonaA na-eji ọla edo Brooks, cork mmanya teepu, ihe ndị na-agbanwe agbanwe, ihe mkpuchi na ogbe.
Ebee ka eji eme igwe Kona?
Konabụ 50% US na 50% Canada nwere. Ọ bụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya; onweghi onye nwe anyi ma anyi enweghi ihe ozo. Anyị na-emepụta ihe niile anyịanyịnya igwesi na ala ma gaa na ụlọ ọrụ na-eme ka anyị okpokolo agba na mmiri na-ezukọta anyịanyịnya igwena Taiwan kwa ọnwa ka ha nọemepụta.
Gịnị bụ gravel anyịnya igwe?
.B.gravel igwe kwụ otu ebebụ mkpọla-ododoigwe kwụ otu ebeEzubere ka ị gbafe ọtụtụ ebe dị iche iche. Rnya aigwe kwụ otu ebeEzubere maka njem mmụta dị iche iche pụtara na ị nwere ike ijikọ ọnụgravelụzọ gasị n'ụzọ ọhụrụ, na-ewere ngalaba nkegravelokporo ụzọ, ụzọ ọhịa, ụzọ ụkwụ, byways na bridlepaths.22.10.2020
Eme Kona anyịnya igwe na USA?
Gịnị bụ pụrụ iche banyere a gravel igwe kwụ otu ebe?
Geometry dị jụụ karịa nke agbụrụigwe kwụ otu ebe.Ajịrịja nkume igwe nrina-eji ogologo wheelbases, n'ihi ya, ha siri ike n'okporo ụzọ na mgbe nọ n'elu n'elu-ejighị n'aka elu dị kagravel, ma nyekwuo nkwụsi ike na nkasi obi n'ogologo anya.23 june 2016 Nọvemba
Gịnị bụ isi nke a gravel igwe kwụ otu ebe?
Na agravel igwe kwụ otu ebe, ndị na-agba ịnyịnya nwere ikike ịga n'okporo ụzọ niile. Nwere ike ịnya tarmac - na-achụrụ ụfọdụ arụmọrụ arụmọrụ - wee gbanwee n'elugravelokporo ụzọ ma ọ bụ ọbụna ụzọ ụkwụ ọhịa singletrack na-asọ. Okwu sara mbara nagravel anyịnya igwebụ nke njem ịnya ụgbọ ala, ejikọtaghị ya na mbara ala.June 15. 2020bọchị 2020
Ebee ka emere Kona?
Konabụ 50% US na 50% Canada nwere. Ọ bụ ụlọ ọrụ nọọrọ onwe ya; onweghi onye nwe anyi ma anyi enweghi ihe ozo. Anyị na-emepụta ihe niile anyịanyịnya igwesi na ala ma gaa na ụlọ ọrụ na-eme ka anyị okpokolo agba na mmiri na-ezukọta anyịanyịnya igwena Taiwan kwa ọnwa ka a na-emepụta ha.
Ndi Trek nwere ibu?
Nnukwubụ onye na-eme igwe igwe kachasị ukwuu na ụwa site na ntinye ego. companylọ ọrụ ahụ na-ere anyịnya igwe n'okpuru yanweaha na-eme ka ha maka isi ụdị kaMee njem, Scott na Colnago.08.30.2013
Ego ole ka ịnyịnya ígwè Kona Sutra Tour dị?
The 2020 Kona Sutra LTD Bikepacking Bike. Kona Sutra LTD na-eji otu ụdị ígwè dị ka Sutra touring bike, mana ejiri gravel / bikepacking wuo ya. Nke a na-atụpu kilogram ole na ole site na igwe kwụ otu ebe iji weta ibu n'okpuru ~ 13kg (28.7lbs).
Olee ụdị brek Kona sutra nwere?
Nwalee Kona Sutra 2020 1 siri ike, ezigbo ibu. E ji ígwè mee eku ahụ, nke na-eme igwe kwụ otu ebe na-adịgide adịgide. 2 Mechanical brek. Kona Sutra nwere diski breeki. 3 Nhazi ọ bụla enwere ike. Onye nwere ike ịnwe nhazi nkwakọ ngwaahịa ọ bụla na igwe kwụ otu ebe.
Gini na eme Kona Sutra ugba ugbo ala?
Ngwakọta igwe a nke igwe igwe na ụkpụrụ okporo ụzọ bụ otu n'ime ihe mere Sutra LTD pụrụ iche ma nye ohere maka taya buru ibu na igwe adaala. Kona jikwa otu ụdị azụ azụ ahụ dị na Sutra LTD.